Maki: wiley | Martech Zone
Zvinorevei "Zvekushambadzira Kwazvo"?
Chipiri, April 5, 2016 Wednesday, April 6, 2016 Charlotte Ziems
Semunhu akaitwa basa kunze kwezviri mukati, kutaurirana, uye kutaura nyaya, ini ndine nzvimbo yakakosha mumoyo mangu yebasa re "mamiriro". Zvatinotaurirana - kungave mubhizinesi kana muhupenyu hwedu pachedu - zvinova zvinoenderana nevateereri vedu chete kana vanzwisisa mamiriro eshoko racho. Pasina mamiriro, chirevo chakarasika. Pasina mamiriro, vateereri vanovhiringidzika nezvekuti sei uchitaurirana navo, izvo zvavanofanirwa kutora, uye, pakupedzisira, nei meseji yako
Corporate Kubhuroka kweDummies: Kubvunzana naChantelle Flannery
Chitatu, July 7, 2010 NeChishanu, Gumiguru 23, 2015 Douglas Karr
Iyi ndiyo vhidhiyo yechipiri, naChantelle Flannery, mune edu mavhidhiyo mavhidhiyo akagadzirwa kuti abudise Corporate Blogging yeDummies. Pakutanga nhasi, isu takaburitsa vhidhiyo yekutanga, ine Douglas Karr. Zvinangwa zvedu zvemavhidhiyo uye kuiswa kwavo kuCorporate Blogging Tips saiti kwaive ku: Kusimudzira kuburitswa kwebhuku, Corporate Blogging YeDummies. Kurudzira saiti uye kubatanidza blogging paTwitter neFacebook. Simudzira Chantelle neni tichitaura nekudzidzisa makambani
Corporate Kubhurogira maDummies: Kubvunzana na Douglas Karr
Rocky Masvingo uye Zach Downs kubva gumi nembiri Nyeredzi Media akauya pasi kune DK New Media hofisi uye yakapfura vhidhiyo yaChantelle neni yemavhidhiyo akati wandei ataida kuisa paCorporate Blogging Matipi saiti. Ichi chaive chikamu chinonakidza. Hapana chimwe chemukati chakanyorwa kana kudzidziswa. Isu takaongorora zvibodzwa zvedu tisati tapfura: Simudzira kuburitswa kwebhuku racho, Corporate Blogging For Dummies. Simudzira saiti uye yemakambani blogging
Yangu Inotevera Kuverenga: Giravhiti Kushambadzira
Chipiri, Kurume 25, 2008 Muvhuro, March 7, 2016 Douglas Karr
Tevere kumusoro pane iyo yekuverenga runyorwa (iri kunyatso kuunganidza) iko Giravhiti Kushambadzira. Ivo vanhu vakanaka paWiley vakanditumira iyo Yekushambadzira Bhuku - ivo vanofanirwa kunge vakave vachiziva kuti ini ndiri mucherechedzo wemabhuku ekushambadzira. Kuneavo vanodzivisa mabhuku ebhizinesi senge denda asi vanoda kudzidza hunhu hwevanhu… ndizvo zvandinoda nezveMabhuku ekutengesa. Mumwe munhu akandibvunza kamwe kana ndakanga ndadzidza Sociology. Ini ndinofungidzira ndine mu